Roobaab Saameyn Reebay oo ka da’ay Muqdisho,& DKMG oo Hub qabatey. – SBC
Roobaab Saameyn Reebay oo ka da’ay Muqdisho,& DKMG oo Hub qabatey.
Posted by Webmaster on October 24, 2011 Comments
Roobaba mahiigaan ah ayaa saacadihii ugu dambeeyay ka da’ayay qeybo ka mid ah Koonfurta dalka gaar ahaan deegaano ay ka midtahay Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho.
Roobabkaasi oo ahaa kuwo aad u waaweyn ayaa waxa ay saameyn buuxda ku yeesheen dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan xeryaha ku yaala magaalada Muqdisho xasrunta dalka,
Dadkani ayaa waxa ay degen yihiin guryo ka sameysan cooshado islamarkaana aan celineyn Dhibicda roobka ee da’eysa, mana heystaan bacaha laga galo iyagoona dhamaantood uu ku yeeshay saameyn roobkani .
Qaar kood oo la hadlay saxaafada waxa ay sheegeen in saameynta ay reebeen roobabkii da’ay ay iminka bacadka la taagan yihiin iyagoo gacnaha heysta Ilmahooda.
Hooyo ka mid ah hooyooyinka ku jira xero ka mid ah xeryaha barakacayaasha ee Muqdisho ayaa sheegtay in ay ka dalbanayaan Gargaar deg deg ah cid alaala cidii wax ka qabankarta xaaladahan heysta, iyadoo gaar ahaan qeylo dhaan u dirtay hay’adaha DKMG ah iyo kuwa Samafalka.
Dhinaca Kale Ciidanka Amaan sugida DKMG ah ayaa Howlgalo ay ka sameeyeen Magalada Muqdisho xarunta dalka waxa ay ku soo qabqabteen Hub isugu jira Qoryaha Fud fudud iyo kuwa Cul culus, waxaana ay sheegeen in hubkani laga soo qabtay degmooyinkii ugu dambeeyay ee ay ka tageen xarakada Alshabaab.
Col C/laahi Cumar Baare oo looyaqaan Ceelbaari ayaa sheegay in Howlgalo xalay ilaa saaka ay sameeyeen ciidamada Dowlada ay ku soo qabqabteen Hubkani, waxaanu intaasi raaciyay in hubkani ay ku jireen baqaaroku yaala deegaanada Suuqa bakaaraha iyo Deg Howlwadaag, iyadoona hubka la soo qabtay ay isugu jireen Qoryaha nooca Fudfudud, Mabmooyin iyo Qoryaha RBB Sida uu hadalka u dhigay Col Ceelbare.
Sikastaba ha ahaatee xaaladaha guud ee magaalada Muqdisho ayaa degeneyd saacadihii ugu dambeeyay, iyadoona ay jireen roobab mahiigaan ah oo ka da’ayay Magaalada iyo nawaaxigeeda.